TOROLALANA HO AN’NY TARATASIM-PANJAKANA : Enim-bolana nanolorana vahaolana ny “Ivotoro”
Raharaha mampifezaka sy mampiferinaina ny Malagasy ny miditra biraom-panjakana eto Madagasikara. 7 octobre 2021
Tsy ho an’ny any ambanivohitra ihany no sahirana amin’izany fa na ny eto an-drenivohitra koa. Sarotra, anjakan’ny kolikoly ny fidirana amin’ireny matetika. Izay indrindra no nahatonga ny teo anivon’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina namorona ny “Ivotoro” hanomezana torohevitra ireo hikarakara taratasim-panjakana.
“Tombontsoa telo, fara fahakeliny, no azo amin’ny fisian’ny Ivotoro (Ivon’ny Torohay). Manamafy ny ady amin’ny kolikoly satria mahalala ny tokony hataony ny olom-pirenena, ka tsy voafitaky ny mpanambaka na mpanararaotra eny anivon’ny biraom-panjakana eny.
Manatanteraka ny paikady hoe : “fanjakana manakaiky vahoaka” sy manamafy ny firosoana amin’ny “digitalisation” hanamorana ny fomba fiasan’ny sampan-draharaham-panjakana isan-karazany. Ankoatra izay, mampihena koa ny fahasahiranan’ny olom-pirenena, noho ny fandaniana fotoana sy vola amin’ny saran-dalana na sakafo isan-karazany amin’ny fivezivezena mikarakara taratasim-panjakana”, izay no nambaran’ny Minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo nandritra ny fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny “Zo mahafantatra” teny Nanisana. Tanjon’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina ny hampitomboana ireo olona misitraka torohay ireo, ka izany no antony nanokafana ny varavaran’ny Ivotoro, tamin’ity fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny zo mahafantatra « droit à l’accès à l’information » ity.
Fanaovana jery todika ny asa vita tao anatin’ny herin-taona latsaka nijoroan’ny Ivotoro no nifotoran’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina, tetsy Nanisana. Nanasana koa ny olom-pirenena hazoto hiantso ny laharana 640, amin’ny sarany 500 Ariary, mba hahafahany misitraka torohay ary indrindra, niantsoana ny sampan-draharaham-panjakana isan-karazany mba hanampy na hanavao (mise à jour) ny torohay momba ny fomba fikarakarana antontan-taratasy isan-karazany ao aminy. “Maro ny olona efa nampiditra ny Ivotoro ho ao anatin’ny fandaharam-potoanany amin’ny fakàna torolalana, indrindra ny eto amin’ny Faritra Analamanga. Maro koa ny mbola tsy mahafantatra. Izany indrindra no anton’ny fampahafantarana natao androany sy fifampiresahana amin’ny mpiara-miombon’antoka ho fanitarana azy amin’ny Faritra maro eto Madagasikara”, araka ny nambaran’ny Minisitra hatrany.
Sampan-draharana telo no mampihodina sy miezaka manatsara izany kalitaon’ny tolotra omena ao amin’ny Ivotoro izany. Eo ny sampana manangona sy manavao ny torohay avy amin’ny sampan-draharaham-panjakana rehetra. Ao ny mandray ny antson’ny olom-pirenena. Eo koa ny sampana manjohy sy manao tombana ary mitondra fanatsarana, miainga amin’ny dom-berina avy amin’ny mpisitraka. Anisan’ny be mpanontany indrindra ao amin’ny Ivotoro ny fombafomba fikarakarana pasipaoro, ny fangatahana tokony hatao amin’ny fanokafana trano fandraisam-bahiny, ny fakàna diplaoma, ny fangatahana fahazoan-dalana hampianatra (Autorisation d’Enseigner), ny fanamarinana ny maha-mpanakanto ary ny mikasika ny lafiny fananan-tany. “Tsy mionona fotsiny amin’ ny fanomezana torohevitra izahay fa miezaka koa manome akony any amin’ireo Minisitera sy tompon’andraikitra. Any izahay no mampita ny hetahetam-bahoaka”, hoy hatrany ny fanazavan’ny Minisitra.